प्रधानमन्त्रीले अहिले नै प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने कारण के थियो ? : डा. दिक्षित – Makalukhabar.com
प्रधानमन्त्रीले अहिले नै प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने कारण के थियो ? : डा. दिक्षित
२०७६ फागुन २० गते १७:१३
फागुन २०, काठमाडाैँ । बरिष्ठ चिकित्सक डा. सुन्दरमणि दिक्षितले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मिर्गौलाको पूनः प्रत्यारोपण नेपालमै गर्ने निर्णय गर्नु सुखद पक्ष भएको बताए । नेपालका नेताहरुले सानो रोग लाग्दापनि विदेश गएर उपचार गरेकोमा उनले दुःख मानेको सुनाउँदे पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको निर्णय सुखद् र सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने, ‘ओलीले पनि यसअघिका पाप धोए । केही महिनाअघिपनि उनले सिंगापुरमा उपचार गरेका थिए । अहिले मिर्गौलाको पूनः प्रत्यारोपण नेपालमै गर्ने निर्णय गरेर नेपालीहरुको ईज्जत बढाईदिए । त्यतिमात्रै होईन, नेपाली डाक्टरहरुको पनि ईज्जत बढाए ।’ उनले प्रत्यारोपणको लागि छनौट गरिएको अहिलेको समयमा भने केही गुनासो पोखे । उनले भने, ‘अहिले कोरोना भाईरसको समय चलिरहेको छ । अहिले नै प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने कारण के थियो ? उहाँले त नियमित डायलायसिस गरिरहनुभएको थियो ।’
डा. दिक्षितले चीनबाट फैलिएको कोरोनाको संक्रमण विश्वभरि फैलिएकोले नेपालले पनि सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालले कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिनको लागि तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय हवाई आवातजावत बन्द गर्नुपर्ने भनेर आफूले यसअघि पनि बोलिसकेको स्मरण गराए ।
उनले भने, ‘तर, नेपाल सरकारलाई नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को प्रचार गर्नतिर ध्यान दियो । हाम्रो सरकारलाई पैसा कमाउने मात्रै ध्यान भयो । कोरोना भाईरसको बारेमा खासै वास्ता गरेन् । यो दुःखद् पक्ष हो ।’ कोरोना भाईरस आज साथ अफ्रिकासमेत पुगिसकेको सुनाउँदै उनले नेपालले यसरी बेवास्ता गर्नु गलत भएको जनाए । उनले थपे,‘त्यत्रो टाढा फैलिईसकेको छ भने नेपाल नआईकन बसेको होला र ?’ उनले दक्षिण कोरियाको एउटा चर्चमा ९ हजारमा यो भाईरसको संक्रमण फैलिएको सुनाए ।
डा. दिक्षितले चीन, दक्षिण कोरियालगायत कोरोना फैलिएका देशबाट खुलेआम नेपाल आउन दिन नहुने तर्क गरे । जापानमा पनि यसको संक्रमण फैलिएपछि अहिले उसले कडा व्यवस्था अपनाएको सुनाउँदै यस्तो बेलामा नेपालबाट २५० जनाको जम्बो टोली नेपाल एयरलाईन्सको फ्लाईटमा जापानको नारिता उडेको भन्दै उनले उक्त कदमप्रतिपनि कडा निन्दा गरे । उनले भने,‘सर्वोच्च अदालतले समेत रोक लगाएको अवस्थामा नेपाल वायु सेवा निगमले अटेरी गरेर जापान गयो । यो दुःखद् पक्ष हो ।’
काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना भाईरस देखिए यसको संक्रमण नराम्रोसँग फैलिनेतर्फ पनि सचेत गराए । उनले भने,‘यो ज्वरो नापेरमात्रै थाहा हुँदैन् । हामी सबैको लागि खतरानक कुरो हो ।’ यद्धपी उनले नेपालीहरुसँग रोगसँग लड्ने क्षमता भने बढि रहेको सुनाए। उनले कोरोनाको डर प्रशस्तै मात्रामा भएपनि तर्सिनुपर्ने अवस्था भने नरहेको स्पष्ट पारे । उनले यसबाट बच्नको लागि सतर्कता अपनाउनसमेत सबैलाई आग्रह गरे ।